चार कम्पनीका शेयर स्टकमा सूचीकृत - Dainik Nepal
आइतबार, ८ भदौ २०७६
चार कम्पनीका शेयर स्टकमा सूचीकृत
दैनिक नेपाल २०७५ पुष २८ गते १७:०६
काठमाडौँ, २८ पुस । धितोपत्र बजारमा यस साता विभिन्न चार कम्पनीका शेयर सूचीकृत भएका छन् । नेपाल स्टक एक्सचेञ्जका अनुसार यस साता ठूलो परिमाणको शेयर माथिल्लो तामाकोशी जलविद्युत् कम्पनीको सूचीकृत भएको छ । सो कम्पनीको १० करोड ५९ लाख कित्ता साधारण शेयर सूचीकृत भयो । सो कम्पनीको शेयर आइतबारदेखि दोस्रो बजारमा खरीद बिक्री शुरु हुने स्टकले जनाएको छ ।
यसै साता जोशी हाइड्रोपावर लिमिटेडको पनि ३७ लाख १४ हजार कित्ता साधारण शेयर स्टकमा सूचीकृत भएको छ । स्वदेशी लघुवित्त वित्तीय संस्था र नागबेली लघुवित्त वित्तीय संस्थाको हकप्रद शेयर पनि यसै साता स्टकमा सूचीकृत भए । स्वदेशी लघुवित्तको ११ लाख ५० हजार र नागबेलीको सात लाख ६६ हजार ५३१ कित्ता शेयर सूचीकृत भएका छन् ।
धितोपत्र बजारमा यस साता १० दशमलव शून्य पाँच बिन्दुले कारोवार मापक नेप्से परिसूचक वृद्धि भएको छ । साताको पहिलो दिन एक हजार १७० दशमलव ७९ बिन्दुमा रहेको नेप्से साताको अन्तिम दिन बढेर एक हजार १८० दशमलव ८४ बिन्दुमा पुगेको छ ।
यस्तै बजार पूँजीकरणका आधारमा नेपाल दूरसञ्चार कम्पनी अग्रस्थानमा रहेको छ । दोस्रोमा नेपाल इन्भेस्टमेन्ट बैंक, तेस्रोमा नबील बैंक रहेको छ । यस्तै स्ट्याण्र्डड चार्टड बैंक, नेपाल लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी, एभरेष्ट बैंक, हिमालयन बैंक, एनआइसी एशिया बैंक, नेपाल एसबिआई बैंक र एनएमबी बैंक क्रमशः रहेका छन् ।
शेयर सङ्ख्या कारोवारका आधारमा नेपाल बैंक लिमिटेड अग्रस्थानमा रहेको छ । सो बैंकको एक हजार १२९ कित्ता शेयर कारोवार भए । त्यस्तै छिमेक लघुवित्त वित्तीय संस्थाको ५२३, एनआइबिएल समृद्धि फण्ड एकको ४१८ एकाइ, नेपाल क्रेडिट एण्ड कर्मस बैंक ३७०, प्रभु बैंक २९२, नेशनल हाइड्रोपावर १९१, बैंक अफ काठमाडौँ १५१, एनआइसी एशिया १२५, कुमारी बैंक ११६ र एनएमबी सुलभ इन्भेस्टमेन्ट फण्ड एकको ११६ एकाइ खरीद बिक्री भए । –रासस
इन्टेरियर डिजाइन अध्ययन गर्नेले बेरोजगार बस्नु नपर्ने
नेप्से परिसूचक पुनः ओरालो यात्रामा
सुनको भाउ फेरि बढ्यो, थाहा पाउनुहोस् कति पुग्यो तोलाको ?
रिचार्जरको एपको नयाँ भर्सन अपडेट रिलिज, अफरभित्र पनि अफरसँगै ग्याजेट्स मेला
‘राजसंस्था’को चर्चा किन भइरहेको छ ?
परराष्ट्रमन्त्री ज्ञवालीलाई पाकिस्तानी विदेशमन्त्रीको फोन : कश्मिर मुद्धामा ‘भूमिका खेल्न’ आग्रह
सतहमा ओली–नेपाल संघर्ष, प्रचण्डले पार्टी हाँक्ने
‘स्वतन्त्र समूह’को भेला आह्वान, नेकपामा समायोजनबारे छलफल हुने
शालिकरामकाे नयाँ काण्ड बाहिरियाे, युवती भेट्न छुट्टै काेठा
चितवनमा ताेडफाेड र प्रदर्शन, डिएसपीसहित चार प्रहरी घाइते
राष्ट्रपति–प्रचण्ड भेटको मुख्य कारण के हुनसक्छ ?
बयान नसकिएपछि रवि लामिछानेलाई हिरासत फर्काइयो
पुडासैनी प्रकरणमा प्रहरीले भन्यो : हाम्रो तर्फबाट अनुसन्धान सकियो
घाेराहीकाे हाेटेलमा बास बसेका व्यक्ति मृत फेला
सामाजिक सुरक्षा योजना कार्यान्वयन गर्न आह्वान
नेकपा अध्यक्ष प्रचण्डद्धारा पहिलाेपटक सचिवालय बैठक आह्वान
लोकतन्त्रमाथि कुनै किसिमको खतरा छैन : सञ्चारमन्त्री बाँस्कोटा
एयरजहोस्टेस हुँ भन्दै फेसबुकमार्फत सम्पर्क गरी ठगी गर्ने महिला पक्राउ
अमेरिकामा नेपाली मूलका उत्सव सिंहलाई शारीरिक सुगठनमा स्वर्ण पदक
फेसबुकमा प्रधानमन्त्रीलाई गाली गर्ने नेविसंघ कार्यकर्ता पक्राउ